Iingcebiso ezivela kwi-Semalt On Indlela yokukhusela iMibhalo, ii-imeyile ezingafunekiyo, kunye neefowuni zefowuni
uMax Bell, u Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi iimibhalo ezixhasayo, ii-imeyile ezingafunekiyo, kunye neefowuni ezithengisayo zingakonakalisa ngokukhawuleza ukuhlwa kwakho. Kunyaka ophelileyo, uKomishinala weeNkcukacha unikezele ngaphezu kwei-114,000 iimibhalo ezingafunwa kunye neefowuni ezicasulayo. Kodwa inani lilindeleke ukuba ligijime kwizigidi ngenxa yokunyuka kwama spammeri kwi-intanethi - ventajas servidores web. Ubudala bokususa imiyalezo ebhaliweyo kunye ne-junk imeyile evela kwiakhawunti yakho akuphela nje ixesha elidlulayo kodwa lixabisa.
Indlela yokukhusela itekisi engafunekiyo
Ngaba ufumene itekisi yokubhalwa kwebombarding from spammers? Akukho gumbi lokwesaba! Ukuba ufumene iimibhalo ezivela kubahlaseli, njenge-Insurance Payment Insurance (PPI) abaphathi bamabango, kufuneka uqikelele ukubika le ngxaki kumnikezeli wakho wenethiwekhi ukufumana izikhokelo ezingaphezulu. Inani elinikeziweyo labanikezeli benethiwekhi banikezela abathengi abanakho iindlela zokukhusela abagaxekile ukuba bangabathukutheli. Ukuvakalisa iicatshulwa ezimbi, thumela umbhalo ongafunekiyo ukuya ku-7726 kwaye ubandakanye nenani elivumelekileyo lomthumeli. Unxibelelwano olukhulu lubekwe phambili ekukhuseleni abathengi ukuba bahlukunyezwe ngabagaxekile nabagxeki. Imigaqo kunye nemigangatho ilawula indlela ababoneleli beenkonzo kunye neenkampani ezisebenza ngayo. Njengomsebenzisi osetyenziswayo, unokugqiba ukunika ingxelo okanye ufake isikhalazo kwi-Office Commissioners Commission. Iinkampani eziye zaphule iimeko zesivumelwano ziphela ukuhlawula imali engaphezulu kwama-£ 500,000. Kungekudala, inkampani yekredithi esebenza eBradford iphelile ukuchitha imali eyi-£ 80,000 emva kokuthumela izigidi zeetekisi ezidangayo kwiinyanga ezintandathu zokugqibela.
njani ukunqanda iifowuni ezithukuthezayo?
Inkonzo yokukhetha yefoni (TPS) ibe luncedo olukhulu kubasebenzisi abasebenzisa iifowuni ezithengisayo ezivela kwi-spammers. Ukumisa iifowuni ezivela kumathengisi kunye nakwiimpawu zokuthengisa, ubhalise inombolo yakho yomsebenzisi kunye nenkonzo yokukhetha yefoni. Iinkampani asagunyazisiweyo ukukubiza emva kokuba ubhalise kwi-TPS. Ukubhalisa kule nkonzo, thumela "i-TPS" ihamba nekheli lakho le-imeyile ukuya ku-85095. Ngemizuzu embalwa, uya kufumana isiqinisekiso sokubhaliweyo kwiNombolo yeNtandokazi yeeNgcaciso eqinisekisa ukuba ungeze kwi database. Ezinye iinkampani zeefowuni nazo zinika iinkonzo zokunceda ukuvimba iifowuni ezikhathazayo. Nangona kunjalo, iirhafu zingahluka ngokuxhomekeke ekufakweni kwemveliso yokukhusela umnxeba.
njani ukuvimbela ama-imeyli ogaxekile?
Ukufumana i-imeyile engafunekiyo kwi-spammers imihla ngemihla inokufutha. Ukunyuka kwama spammeri kwi-intanethi kuye kwanda njengoko ixesha lihamba. I-Spammers isebenzisa ii-imeyili ezingenanto ukufikelela kwi-data yomsebenzisi wokugqibela. Njengomsebenzisi wefowuni, thintela ukucofa nokuvula ii-imeyile ezivela kwisizinda esingenamandla. Ugaxekile ufumana isaziso xa uvula ikhonkco ithunyelwe kwi-akhawunti yakho ye-imeyile. Sebenzisa iqhosha 'lokungabhalisi' ukuvimba ii-imeyile ezingafunekiyo ukuya kwibhokisi lakho lebhokisi. Ukuba uye wafumana ii-imeyile rhoqo kwiidilesi ezithile ze-imeyile, ukukhusela iidilesi ze-imeyile kukudutshulwa okulungileyo kukuthatha. Ukukhusela idilesi kuqinisekisa ii-imeyile ezizayo ezivela kwiidilesi ze-imeyile ezivaliweyo ziya kwifolda yogaxekile.
Ukugcina inkqubo yakho yokulwa nentsholongwane kuhlaziywa kubaluleke kakhulu xa kuziwa khuseleko lwakho lwefowuni. Musa ukuvumela iimfesane, iifayile ezikhohlisayo, kunye ne-imeyili engafunekiyo. Sebenzisa amacebo kunye neengcebiso ezikhankanywe apha ngasentla ukuba zibe kwicala elikhuselekileyo.